Iindaba -Imfuno yezixhobo zokusika i-carbide izinzile, kwaye ibango lezixhobo ezinganyangekiyo liyakhutshwa
Phakathi kwezixhobo zokusika, i-carbide yesamente isetyenziswa ikakhulu njengezinto zokusika izixhobo, njengokujika izixhobo, ukusika izixhobo zokucola, isicwangciso, ukubhola, isixhobo esikruqulayo, njl njl. Isetyenziselwa ukusika isinyithi, isinyithi esingenantsimbi, iiplastiki, ifayibha yemichiza, Grafayithi, iglasi, ilitye kunye nesinyithi esiqhelekileyo, kunye nokusika izinto ezinqabileyo ezinje ngentsimbi enganyangekiyo, i-stainless steel, intsimbi ephezulu ye-manganese kunye nesinyithi sesixhobo. Cutting ikakhulu waqonda izixhobo umatshini. Okwangoku, isixa sekhabhayithi yesamente esetyenzisiweyo ekusetyenzisweni kwezixhobo zeakhawunti malunga ne-1/3 yemveliso iyonke ye-carbide e-China, apho i-78% isetyenziselwa izixhobo ze-welding kunye ne-22% isetyenziselwa izixhobo ezinokubanjwa.
Izixhobo zokusika zisetyenziswa ikakhulu kwimveliso. Izixhobo zokusika i-carbide eqinisiweyo zisetyenziswa kakhulu ekusikeni ngesantya esiphezulu ngenxa yeempawu zazo ezibalaseleyo (amandla aphezulu, ukomelela okuphezulu, ukomelela okuphezulu, uzinzo olushushu lwe-thermal kunye nobulukhuni be-thermal). Amashishini emveli asezantsi anje ngoomatshini kunye nemoto, inqanawa, uloliwe, ukungunda, impahla elukiweyo, njl. Isiphelo esiphakamileyo kunye neendawo zokufaka ezivelayo zibandakanya i-aerospace, icandelo lolwazi, njl. njl. phakathi kwabo, oomatshini kunye nokuveliswa kweemoto zezona ndawo zibaluleke kakhulu zesicelo sezixhobo zesamente zentsimbi.
Okokuqala, izisombululo processing ngomatshini ke iimveliso ezingundoqo cemented kushishino khabhayithi ngesamente, ezijolise ezantsi mveliso kunye nokulungiswa emasimini ezifana CNC izixhobo umatshini, aerospace, ngomatshini processing processing, ukwakha iinqanawa, izixhobo zobunjineli zaselwandle, njl Ngokutsho kwedatha I-Bureau yeSizwe yezibalo, izinga lokukhula konyaka kwishishini lokuvelisa kunye nezixhobo ezizodwa laseTshayina liye laphindaphindeka kangangeminyaka emibini ilandelelana emva kokuphuma ngo-2015. Ngo-2017, ixabiso lemveliso yezixhobo ngokubanzi yayili-4.7 yezigidi zeerandi , kunye nokonyuka konyaka-nge-8.5%; Ixabiso lemveliso yeshishini lokuvelisa izixhobo ezizodwa yayiyi-3.66 yezigidigidi ze-yuan, ngokunyuka konyaka-nge-10.20%. Njengoko utyalomali lweeasethi oluzinzileyo kushishino lokuvelisa luye lwasasazeka lwaza lwanda, ibango lezisombululo kwimizi-mveliso liya kuqhubeka ngakumbi.
Kwimveliso yeemoto, esinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu kushishino lokuvelisa iimoto sisixhobo sokubumba, kwaye isixhobo sokubumba sekharbide sesamente lelona candelo libalulekileyo. Ngokwedatha yeNational Bureau yezibalo, imveliso eChina iyonke inyuke ukusuka kwi-9.6154 yezigidi ngo-2008 ukuya kwi-29.942 yezigidi ngo-2017, ngomyinge wokukhula we-12.03%. Nangona izinga lokukhula lithanda ukwehla kule minyaka mibini idlulileyo, phantsi kwesiseko esiphakamileyo, ibango lokusetyenziswa kwezixhobo zokusika i-carbide kwisamente yezithuthi ziya kuhlala zizinzile.
Ngokubanzi, kwicandelo lokusika, izinga lokukhula kweshishini lemoto kunye noomatshini lizinzile, kwaye ibango le-carbide yesamente lizinzile. Kuqikelelwa ukuba ngo-2018-2019, ukusetyenziswa kwezixhobo zokusika ze-carbide ezinesamente kuya kufikelela kwiitoni ezili-12500 kunye neetoni ezingama-13900 ngokwahlukeneyo, ngenqanaba lokukhula elingaphezu kwamanani aphindwe kabini.
I-Geology kunye nemigodi: ukubuyiswa kwemfuno
Ngokubhekiselele kwizixhobo ze-geological kunye nezamaminerali, i-carbide yesamente isetyenziswa ikakhulu njengezixhobo zokomba amatye, izixhobo zemigodi kunye nezixhobo zokomba. Iifom zeemveliso zibandakanya ukubhola ilitye lokugrumba, ukuqhobosha isuntswana lokuhlola komhlaba, iDTH Drill yezemigodi kunye neoyile, ikhowusi yokomba, ukukhetha umsiki wamalahle kunye nokugrumba kwempembelelo kwishishini lezinto zokwakha. Izixhobo zemigodi ye-carbide eqinisiweyo zidlala indima ebalulekileyo kumalahle, ipetroleum, iiminerali zentsimbi, ulwakhiwo lwezibonelelo kunye neminye imiba. Ukusetyenziswa kwe-carbide yesamente kwizixhobo ze-geological kunye nezokumbiwa kwemigodi zi-25% -28% yobunzima be-carbide yesamente.
Okwangoku, i-China isekwisigaba esiphakathi sokwenza amashishini, kwaye inqanaba lokukhula kwemfuno yezixhobo zamandla liyacotha, kodwa ibango lilonke liza kuhlala liphezulu. Kuqikelelwa ukuba ngo-2020, amandla asetyenziswayo eTshayina aya kuba malunga neebhiliyoni ezi-5 zeetoni zamalahle aqhelekileyo, i-750 yezigidi zeetoni zentsimbi, i-13.5 yezigidi zeetoni zobhedu olusulungekileyo kunye neetoni ezingama-35 ze-aluminiyam yoqobo.
Phantsi kwemvelaphi yokusebenza kwemfuno ephezulu, ukwehla kwenqanaba lezimbiwa kuya kunyanzelisa amashishini ezemigodi ukuba anyuse inkcitho yenkunzi. Umzekelo, i-avareji yenqanaba legolide yentsimbi yehle isuka kwi-10.0 g / T kwii-1970s zokuqala ukuya malunga ne-1.4 g / T ngo-2017. Oku kufuna ukonyusa imveliso ye-ore ekrwada ukugcina uzinzo kwimveliso yentsimbi, yiyo loo nto kuqhuba ibango lokuba izixhobo zokumba umgodi.
Kule minyaka mibini izayo, njengoko amaxabiso amalahle, i-oyile kunye nezimbiwa zentsimbi zihlala ziphakamile, kulindeleke ukuba ukumba kunye nokuhlola kuya kuqhubeka ukunyuka, kwaye ibango le-carbide yesamente yezixhobo ze-geological kunye nezemigodi ziya kuqhubeka ukwanda ngokubonakalayo. Kulindeleke ukuba inqanaba lokukhula kwebango liza kugcinwa malunga ne-20% kwi-2018-2019.
Nxiba izixhobo ezinganyangekiyo: ukukhutshwa kwemfuno
Gqoka i-carbide enganyangekiyo isetyenziswa ikakhulu kwimveliso yolwakhiwo lweendawo ezahlukeneyo zokunxiba, kubandakanya ukungunda, uxinzelelo oluphezulu kunye nobushushu obuphezulu, iindawo ezingagqokiyo, njl. Okwangoku, i-carbide enesamente esetyenziselwa ii-akhawunti ezahlukeneyo zomngundo malunga I-8% yemveliso iyonke yesamente, kunye nomngxunya woxinzelelo oluphezulu kunye neqondo lokumelana nobushushu obuphezulu malunga ne-9% yemveliso iyonke yesamente. Amalungu banxibe-enganyangekiyo zibandakanya umlomo, isikhokelo kaloliwe, plunger, ibhola, ukudinwa anti-skid pin, ikhephu isitya ipleyiti, njl
Ukuthatha ukungunda njengomzekelo, ngenxa yamashishini asebenzisa ukungunda ngakumbi, kubandakanya imoto, izixhobo zasendlini, yona kunye namanye amashishini abathengi ngokusondeleyo kubomi babantu bemihla ngemihla, phantsi kwemvelaphi yokuphuculwa kokusetyenziswa, ukuhlaziywa kwemveliso kuyakhawuleza kwaye kuyakhawuleza , kwaye iimfuno zokubumba nazo ziphezulu kwaye ziphezulu. Kuqikelelwa ukuba izinga lokukhula ngokudibeneyo leemfuno ze-carbide yesamente ngo-2017-2019 liya kuba malunga ne-9%.
Ukongeza, ibango le-carbide yesamente yoxinzelelo oluphezulu kunye neqondo lobushushu eliphezulu elinganyangekiyo kunye neenxalenye zoomatshini ezinxibayo kulindeleke ukuba zonyuke nge-14.65% kunye ne-14.79% ngokwahlukeneyo ngo-2018-2019, kwaye ibango liya kufikelela kwiitoni ezili-11024 kunye neetoni ezili-12654. .